China Abenzi beFumaric Acid kunye nabathengisi | IBohua
CAS Hayi: 110-17-8
Amanye amagama: Iifumaric Acid
Iphakheji: 25kg / iingxowa
Ubude bethuba: Ubomi iminyaka emi-2
Ukugcina: Igcinwe eKhuselweyo kwindawo ekhanyayo, eyomileyo nepholileyo
I-Fumaric acid, ekwabizwa ngokuba yi-fumaric acid, fumaric acid, purpuric acid okanye lichenic acid, yikristale engenambala, enokutsha, i-carboxylic acid ethathwe kwi-butene. I-asidi ye-Fumaric iyakuthanda iziqhamo kwaye inokufumaneka eCorydalis, Boletus, Lichen kunye ne-Icelandic seaweed.
Ukupakisha: 1kg / ingxowa, 25kgs / igubu (ezimbini zeplastiki-iingxowa ngaphakathi kunye nePhepha-imigqomo okanye ngokweemfuno zabathengi.)
Ukugcina: Gcina kwizikhongozeli ezixineneyo, ezinganyangekiyo, kuthintele ukubekwa elangeni ngqo, ukufuma kunye nobushushu obugqithisileyo.
Ubomi beshelf: iinyanga ezingama-24.
Sinokubonelela ngeengxowa ezenziwe ngokwezifiso ngokwemfuneko yomthengi
Ilayisha ubungakanani: 23mts / 20'FCL (ngaphandle pallet)
Imilinganiselo: 1.22cbm / mt 28cbm / 20'FCL
Ixesha lokuzisa: kwiintsuku ezili-10 ~ 20 emva kokufumana ukuhlawulwa kwangaphambili komthengi kunye ne-LC yoqobo.
1) IFumaric acid inokusetyenziswa njenge-acidulant.
2) I-Fumaric acid ine-bacteriostatic kunye ne-antiseptic function. I-3) I-Fumaric acid inokusetyenziswa njenge-acidity regulator, i-acidifier, i-thermal-oxidative ukumelana nomncedisi, ukuphilisa ukukhawulezisa kunye nespice.
4) I-asidi ye-Fumaric inokusetyenziswa njenge-asidi ye-arhente ye-effervescent, inokuvelisa amaqamza awandisiweyo.
I-5) I-Fumaric acid inokusetyenziswa njenge-arhente yokuhambisa umbala ephakathi kunye neyokukhanya.
I-6) I-Fumaric acid ikwasetyenziselwa ukuvelisa i-resin ye-polyester engafakwanga.
7) Kwimveliso yezobisi, isetyenziselwa ukuvelisa i-alexipharmic sodium dimercaptosuccinate kunye ne-ferrous fumarate.
(1) Kwishishini lokutya: inokusetyenziselwa ukwenziwa kunye nokuxutywa kwesiselo, i-liqueur, incindi yeziqhamo kunye nokwenza iilekese kunye nejamu njl.njl.
(2) Kwimizi-mveliso yecuba: i-malic acid derivative (efana nee-esters) inokuliphucula ivumba lecuba.
(3) Kwishishini lokuxuba amayeza: iitroches kunye nesiraphu edityaniswe ne-malic acid zinencasa yeziqhamo kwaye zinokuququzelela ukufunxeka kunye nokusasazeka komzimba.
(4) Umzi mveliso weekhemikhali zemihla ngemihla: njengearhente elungileyo yokuntsonkotha, inokusetyenziselwa ifomula yentlama yamazinyo, iifomula zendlela yokwenza izinto njalo njalo. Ikwanokusetyenziswa njengezixhobo zokuhambisa nezokuhambisa. Njengesongezo sokutya, i-malic acid yinto ebalulekileyo yokutya ekuboneleleni kokutya.Njengezinto zokutya ezihamba phambili kunye nomthengisi wezithako zokutya e-China, sinokubonelela ngemalic ekumgangatho ophezulu.
IZINTO Ukucaciswa IZIPHUMO
INKQUBO UMGLAWULI OMHLE OMHLOPHE UKUTHOBELA
UTHETHA (KWISISEKO ESOMILEYO) 99.5 --- 100.5% 99.93%
I-ARSENIC (njenge) I-1PPM <1PPM
INKOKHELI PP2PPM <2PPM
INDAWO YOKUHLALA .00.05% 0.021%
AMANZI ≤0.5% 0.19%
PH (1:30) 2-- 2.5 2.2
UMBALA (Pt-Co) ≤15 # Ishumi elinambini #
I-ACIC YAMANDLA ≤0.1% 0.022%
INDAWO YOKUNYIBILIKA Ngama-286 ~ 302 ° C 298 ° C
IZINTO ISALATHISO IZIPHUMO
ODLULA NGE-300 MESH 100%
I-ARSENIC (njenge) PP3PPM <1PPM
IZITOLO ZOBUNZIMA (Pb) I-10PPM <5PPM
INDAWO YOKUHLALA ≤0.1% 0.027%
AMANZI ≤0.3% 0.19%
UMBALA (Pt-Co) I-15 Hazen 12 IHazen
I-DSS. ≤0.3% 0.29%
INDAWO YOKUNYIBILIKA Ngama-286 ~ 289 ° C 289 ° C
UKULUNGISELELA (25 ° C) ≥1.00g / 100ml amanzi 1.03g / 100ml amanzi
Umboniso womfanekiso weFektri
Amalungiselelo okubonisa umfanekiso
Egqithileyo I-DL-Malic Acid
Okulandelayo: I-Acidity Regulator BP98 yeBanga leCrystalline Powder 99% min iSodium Citrate
IFumaric Acid yokutya kwiBakala
Isityalo seFumaric Acid
Ixabiso leFumaric Acid
Umthengisi weFumaric Acid